म्हेनङ तामाङ पहिचानको एउटा कोशेढुङ्गो – खोजराज गोले – NamoBuddha Khabar
आइतबार, कार्तिक ०९, २०७७ | ११:५५:५६ |
म्हेनङलाई तामाङ पूर्खाले महान् पर्वको रूपमा स्थापित गराएका देखिन्छन् । यसलाई प्रकृति तथा पितृपूजासँग सम्बन्धित पर्व (चाड)को रूपमा लिन सकिन्छ । यिनीहरू आफू बसेको प्रकृति (स्थान)लाई ‘बप्सा’ भन्ने गर्दछन् । बप्सामा ज्योहो/ज्योमो स्थापित गरेका हुन्छन् । ज्योहो/ज्योमो भनेको पितृको एक रूप हो । त्यसैले आफ्नो पर्यावयरण र पितृलाई मौसम मिलाएर पूजा गर्दछन् । म्हेनङमा पनि उनै प्रकृति (स्थान/पर्यावरण) र पितृहरूलाई हर्षोल्लासका साथ पूजा आराधना गर्दछन् । आफ्नो बप्सामा बप्पा अर्थात् अनूकुलित हुने एवंरीतले पितृको सम्झना गर्ने संस्कृतिको एउटा रूप म्हेनङ पनि हो ।
तथापि पछिल्लो समयमा बोनधर्ममाथि विभिन्न व्यहोराबाट आक्रमणहरू भए । बौद्धधर्ममाथि शङ्कराचार्यले गरेको प्रहार पनि सामान्य सावित भएन । देशकै हिन्दू राज्यसत्ताको निर्मम् दबाबले झन तहसनहस नै पार्ने काम गर्यो । परिणामतः तामाङले आफ्नै म्हेनङलाई बिर्सन पुग्यो । अहिले त म्हेनङलाई दशैँको रूपमा बुझ्न थालेका छन् अनि दशैँ बहिष्कारको नाममा पूर्खाको नासोको रूपमा रहेको म्हेनङलाई पनि दशैँ भन्दै फाल्ने काम गरिरहेका छन् । आफ्ना सन्ततिका यस्ता हर्कतले तामाङ ज्योहो/ज्योमोहरू शायद निराश भएका छन् । कहाँ पुग्ने र पुर्याउने हुन् भन्ने अन्यौलतामा रुमलिएका छन् ।
‘म्हेनङ’लाई तामाङ समुदायले ‘पर्व’ वा ‘चाड’को रूपमा बुझने गरेका छन् । कतिपयले त यसलाई ‘दशैँ’को पर्यायवाची शब्दको रूपमा लिएका पाइन्छन् । कतिले चाहिँ ‘तामाङको म्हेनङ ल्होछार हो’ पनि भन्ने गरेका यदाकदा सुनिन्छन् । कतिपयले भने ‘म्हेनङ’लाई नै सूर्यपात्रो अनुरूपको ‘अशोज’ महिनाको रूपमा पनि बुझ्ने गरेका पाइन्छन् । त्यस्तैगरी म्हेनङ भनेको बोनको मात्रै हो; लामा (बौद्ध)को होइन भन्ने गरेका पनि देखिन्छन् । धेरैजसो त हिन्दू राज्यसत्ताद्वारा लादिएको हिन्दू चाड हो भन्दै बहिष्कार गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । लहैलहैमा लागेर कतिपयले बहिष्कार पनि गर्दै आएका छन् । यति वर्ष अघिदेखि नै छोडेको भनेर आफूलाई साँच्चैको सचेत र होनाहार नेतृत्वदायी व्यक्ति सावित गर्ने प्रयास पनि गर्ने गरेका छन् ।
वास्तवमा म्हेनङ के हो त ? दशैँ र म्हेनङको बीचमा के फरक छ ? म्हेनङ कसरी दशैँ होइन ? कहिलेदेखि म्हेनङमाथि दशैँ कसले कसरी खप्ट्याएको थियो ? यस्तै प्रश्नहरू धेरैले सोध्न थालेका छन् । तथ्यगत रूपमा यिनै प्रश्नहरूको उत्तर प्राप्त गर्न नसकेसम्म यो अन्यौलताले दुःख दिइरहने नै छ । आजको अनुसन्धानकर्ता, लेखक, पत्रकार र सचेत समूह तथा व्यक्तिले यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा अझै कयौं समयसम्म तामाङ राष्ट्रलाई यो काउसो सावित हुनेछ । अन्यौलताको बन्दीगृह बन्नेछ । यस्तै सोचका साथ लोकोत्तर लोकवादी विचार समूहले गएको २०७१ सालदेखि ‘म्हेनिङला सोइनम्’ शीर्षक अन्तर्गत आन्दोलन नै चलाएको छ ।
२.१ शब्द आयात :
वास्तवमा ‘म्हेनङ’ भनेको पर्व (चाड) भन्दा अगाडि तामाङ महिनाको नाम हो । यसलाई ठाउँ विशेष ‘म्हेनङ’ वा ‘म्हेनिङ’ भनी उच्चारण गर्ने गरिएको छ । जे जसरी उच्चारण गरे तापनि ‘म्हेनङ’ भनेको तामाङ समुदायले गणना गर्ने नवौं महिनाको नाम हो । यसले सूर्यपात्रो अनुसारको ”अशोज र कात्तिक महिनाको करीब आधा आधा भेट्छ (मोक्तान, २०७२ : ३०३) ।”
तामाङ भाषामा महिनाको नाम : (१) ख्रेला, (२) बेने, (३) नम्दुङ, (४) दुगू, (५) ड्वाफ्रे, (६) बेल्बो, (७) गोने, (८) यन्दे, (९) म्हेनङ, (१०) सोङराती, (११) बोइतापा र (१२) तापा हुन् ।
माघबाट गन्ती शुरू हुने हुनाले नै कतिपयले ‘म्हेनङ’लाई ‘अशोज’ भनेर पनि चिन्ने गरेका पनि हुन् । विशेषतः २०४६ सालअघिसम्म ‘म्हेनङ’माथि हिन्दूसत्ताले ‘दशैँ’ लादेको थियो । चन्द्रपात्रोको बारेमा खासै ज्ञान र उपलब्धता नभएकोले पनि तामाङ समुदायसमेत सूर्यपात्रोलाई अवलम्बन गर्न बाध्य थिए । त्यसैले सूर्यपात्रोलाई नै अवलम्बन गर्ने क्रममा ‘म्हेनङ’लाई नै ‘अशोज’ महिनाको तामाङ नाम भन्ने अर्थमा बुझ्दथे । त्यहीक्रममा ”तामाङहरू प्रत्येक वर्ष असोज महिनाको दशमीको तिथिलाई ‘दशैँ’ चाडको रूपमा मनाउँछन् । दशैँलाई उनीहरू ‘म्हेनिङ’ भन्दछन् (तामाङ, रवीन्द्र, २०५६ पृ. ६२) ।” तथापि पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्यसँग धेरै परिवर्तनहरू भएका थिए । प्रायः आदिवासी जनजातिहरूले आ-आफ्ना मौलिक पहिचानमूलक परिचयको खोजी गर्न थाले । सोहीक्रममा ”… वि.सं. २०४६ पछि देशमा बहुदलिय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएपछिको स्वतन्त्र वातावरणमा तामाङ संघ, संस्था, विद्वान्हरूले दशैँ बहिष्कार गरौं भन्ने आवाजहरू तामाङ समाजमा ल्याइरहेका छन् (ऐ.ऐ. पृ. ६४) ।”
यिनै तथ्यहरूका आधारमा वि.सं. २०७० सालदेखि सञ्चालित लोकोत्तर लोकवादी विचार समूह नामक आन्दोलनले भने ‘म्हेनङ’लाई हेर्ने र बुझ्ने क्रममा आफ्नै तामाङ मौलिक दृष्टिकोणको लागि पहल शुरू गर्यो । त्यसको एक वर्षपछि वि.सं. २०७१ सालमा आइपुगेपछि ‘म्हेनिङला सोइनम्’ शीर्षकमा सांस्कृतिक पुनःजागरणलाई आन्दोलनकै रूपमा अगाडि बढायो । तामाङ कलाकार/गायकहरू (छेवाङ तेञ्जिङ लामा, फूलकुमार बोम्जन, विश्व दोङ, मिन योञ्जन)समेत आन्दोलनलाई आफ्नोतर्फबाट सक्तो सहयोग गरे । सकारात्मक सोचका बुद्धि तामाङले समेत आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाए । विश्लेषक बुद्धि तामाङ र कलाकारहरूका कारण आन्दोलनले भव्यता हासिल गर्यो । परिणामतः पोखराबाट शुरू भएको आन्दोलनले सिन्धुली, सर्लाही, काभ्रे र काठमाडौंमा आफूलाई उभ्याउन सफल भयो । त्यसक्रममा स्थानीय व्यक्तित्वहरूले व्यापक सहयोग गरेका थिए ।
२.२ शब्दोत्पत्ति र विस्तार
‘म्हेनङ’ शब्दको उत्पत्ति र विस्तारको बारेमा उल्लेख भएको खासै पाइएको छैन । यस सम्बन्धमा खोजीनिधीतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म खोजीनिधीको हकमा पछि परिरहन्छ; तबसम्म त्यो समाज नै पछि परिरहने हुन्छ । त्यसैले जिम्मेवारी वहनको समय भएको भन्न सकिन्छ ।
यति हुँदा-हुँदै पनि ‘म्हेनङ’को अर्थ खोज्नै नसकिने अवस्था भने होइन । यस मासलाई तामाङ समुदायले बुझने र त्यसक्रममा गर्ने संस्कार संस्कृतिहरूलाई हेर्ने हो भने केही हदसम्म कुरा गर्न सकिन्छ । त्यसरी हेर्दा, यो भनेको, ज्योहो अर्थात् आफ्ना म्हेमेहरूलाई पुज्ने समय पनि हो । कुल र पूर्खालाई बुझाउने पर्व पनि हो । यसप्रकार हेर्दा ‘म्हेमे’हरूलाई पुज्ने ‘दङ’ अर्थात् क्रम एवंरीतले यसबेला ‘म्हेमेदङ’ भन्ने क्रम मुख्य हुने हुनाले कतै त्यही ‘म्हेमे’ र ‘दङ’बाट निर्मित ‘म्हेमेदङ’ पो हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिएला कि ? त्यही ‘म्हेमेदङ’ बाटै ‘म्हेनङ’ अनि ‘म्हेनिङ’ भएको पो हो कि ? तर यो कोरा कल्पना मात्रै हो ।
जेहोस्, ‘म्हेनङ’ महिनामा परेकोले नै यस पर्वलाई नै ‘म्हेनङ’ भनिएको हो भन्नेमा असहमति जनाइरहनुपर्ने जस्तो देखिँदैन । दुगु ल(महिना)को ङ्ह्य (पूर्णिमा)लाई दुगु ङ्ह्य र तापा ङ्ह्य भनेजस्तै गरी ‘सोङराती’को समयमा फुल्ने फूललाई ‘सोङराती’ नै भन्ने गरिएको छ । तापनि, स्मरणीय कुरो यो पनि हो कि- ‘सोङराती’ फुल्ने मास भएकोले महिनाको नाम पनि ‘सोङराती’ भनिएको हो वा ‘सोङराती’ मासमा फुल्ने भएकोले फुलको नाम पनि ‘सोङराती’ भएको हो भन्ने चाहिँ अध्ययनको विषय हो । मासको नाम राखेपछि ‘सोङराती’ फल्ने क्रम चलेको हो वा त्यसरी नामाकरण गर्नु भन्दा अगाडिदेखि नै ‘सोङराती’ फूल प्रकृतिमा फुल्ने गरेका थिए भनेर खोज्ने हो भने अझै तथ्यको नजिक पुग्न सकिन्छ ।
यसप्रकार ‘सोङराती’ फूल फुलेको समयको नाम राख्ने क्रममा ‘सोङराती’ प्रशस्तै फुल्ने भएकोले मासको नाम पनि सोही अनुरूप राखेको हुनुपर्दछ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस तथ्यको आधारमा भन्ने हो भने शायद तामाङ पूर्खाले आफ्ना म्हेमेहरूलाई म्हेमेदङसहित मोइगो (आराधना) गर्ने क्रम मास भएको हुनाले नै त्यस मासको नाम पनि सोही अनुरूप नै राखेका हुनुपर्दछ भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
३. म्हेनङको शुरूवात
म्हेनङ पर्व (चाड) कहिलेदेखि शुरू भएको वा गरिएको थियो भन्ने सम्बन्धमा यकिन तथ्य वा प्रमाण पाइएको छैन । यसले पनि म्हेनङको ऐतिहासिकतालाई स्पष्ट पार्दछ अर्थात् यो कति पुरानो पर्व रहेछ त भन्ने सम्बन्धमा ज्ञान दिएको छ । यसले म्हेनङ पर्व तामाङ म्हरमेनको शुरूवाती समयसँगै शुरू भएको थियो भनी अनुमान लगाउन सहयोग गरेको छ । यसैक्रममा तामाङ समाजमा यस पर्वलाई कसरी, कुन मान्यता वा दर्शन अनुरूप मनाउने गरिएको छ त भन्ने पाटोबाट पनि हेर्न अति जरुरी हुन्छ ।
तामाङ समाजलाई बोन र लामा (बौद्ध)को संयोजन मान्ने गरिएको छ । यस समाजमा बोम्बो, तम्बा र लामा गरी मुख्य तीन गेन्दुन (इन्स्टिच्यूट)हरू रहेका छन् । बोम्बो र लामा फरक मान्यता र दर्शनसहित कायम रहेको छ । तम्बालाई भने यी दुवैको मध्यस्तकर्ताको रूपमा पनि लिने गरिएका पाइन्छन् । हुन पनि तामाङ समाज बोम्बो र लामा विधि अनुरूप सञ्चालित रहेको स्पष्ट छ । बोम्बोको बोन भाषा र मान्यता अनि दर्शन रहेको छ । तामाङ लामाले मान्ने बौद्ध धर्मलाई बौद्ध दर्शन (philosophy) र बोन संस्कृति (culture)को समिश्रण हो भन्ने गरेका पाइन्छन् ।
यस प्रकार म्हेनङलाई हेर्ने तामाङ बोन तथा तामाङ लामा परम्पराको आधारमा केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसक्रममा यस समुदायले कहिलेदेखि बोन र लामालाई अँगाल्दै वा अभ्यास गर्दै आएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले तामाङलाई जन्मजात रूपमै बौद्ध धर्मावलम्बी भन्ने गरिएको छ । त्यसरी भन्दाखेरि बौद्ध धर्मको विकास अघि के तामाङसँग केही थिएन त भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसो त आजभन्दा ३२ हजार वर्ष अगाडि नै काठमाडौं वरिपरि आइसकेको भनिएको तामाङ समुदायले आफ्नो सभ्यता विकासको शुरूदेखि नै बोन धर्मलाई अँगाल्दै आएको स्पष्ट छ ।
यहाँ बोन भन्नाले तोन्पा शेरापसँग जोडिएको वा उनैले निर्माण गरेको बोन धर्म भने होइन । तामाङले विकास गरेको बोन धर्म भनेको प्रकृतिपूजक वा प्रकृतिवादसँग सम्बन्धित बोनधर्म चाहिँ हो । यो धार्मिक विश्वास वा आस्था नियण्डरथाल मानवको समयदेखि नै उदविकास भएको भन्ने तथ्यहरू मानवशास्त्रीय अध्ययनका क्रममा पाइन्छन् । जतिखेर आत्मा र प्रकृतिलाई दैवीशक्तिको रूपमा मान्दथे । यो नै संसारमा उदय भएको पहिलो धार्मिक मान्यता थियो । त्यसैको जगमा पछि मात्रै हिन्दू, त्यसभित्र पनि जैन र चार्वकहरू देखा परेका थिए । बोनको प्रकृतिवाद हिन्दूमा आउँदा बहुदेवतावादमा स्थापित भएको थियो ।
चार्वकले देवतावादको घोर विरोध थालेकै थियो । त्यस्तैमा बुद्धदर्शनको पनि उदय भएको पाइन्छ । जसले अर्इश्वरवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो तर तत्कालीन अध्यात्मिक समाजबाट दैवी पक्षको अस्तित्व पूर्ण रूपमा समाप्त भएन । परिणामतः हिन्दू बहुदेवतावादको विकल्प स्वरूप एकदेवतावादमा आधारित ख्रिश्चियन र मुस्लिम धर्महरू देखा परे । बिर्सन नहुने बुरा यो पनि रहृयो कि- यी सबै नयाँ निर्मित धर्महरूको माउ वा आधार स्रोत भने प्रकृति र आत्मालाई सर्वोपरी मान्ने बोनधर्म नै रहृयो । उत्तरआधुनिक भनिएको समयमा पनि धार्मिक आस्था र मान्यताका आधारमा नयाँ धार्मिक आन्दोलनहरू चलिरहेका छन् । तिनीहरू पनि बोन धार्मिक मान्यतादेखि साँच्चै अलग्गै रहन सकेको छैन ।
यसपछि अब हामीले म्हेनङलाई बोन र बौद्ध (लामा) धर्म अनुसार के छ भनेर हेर्न सक्नुपर्दछ । बोन धर्मको कुरा गर्नुपर्दा तामाङ समुदायले परापूर्वकालदेखि नै अँगाल्दै आएको देखिन्छ । पछिल्लो समय (बौद्ध धर्मावलम्बी भएको दाबी गर्दै बोनमाथि कटाक्ष गर्नुलाई कतिपयले ठूलै प्राप्ति वा महानताको रूपमा लिएको जस्तो पनि देखिन्छ । बोनहरूले लामालाई पछि आएको साथै शुद्ध बौद्ध धर्मबाट चिप्लिएकाहरू भनेर आरोप लगाउने गरेका पनि देख्न सकिन्छ । जेहोस्, यी दुर्इ विपरित धार्मिक मान्यताहरूबीच जस्तै बेमेल रहेतापनि खासै अशोभनीय द्वन्द्व छैन । बरू दुवैका बीचमा सहकारिता नै देखन पाउनु खुशीको कुरा हो ।
४. सांस्कृतिक परम्परा
४.१ बोन धार्मिक परम्परा
तामाङ समाजको पहिलो साथै अहिलेसम्म पनि निरन्तर प्रयोगमा रहेको बोन धर्म नै हो । यसमा बोन वा बोम्बो हुने गर्दछन् । त्यसैलाई ‘झाँक्री’ भनिएको हो । यसभित्र पनि विविध आधारमा छुट्याइएका देखिन्छन् । ती सबै प्रकारहरूका बारेमा पूर्ण जानकारी बिना खैरो खन्ने काम भने राम्रो मान्न सकिन्न । त्यसैले कुनै पनि विषयमा गहिरो अध्ययन बिनाको चर्चा, विश्लेषण वा संश्लेषणहरू तुकविहीन हुने गर्दछन् ।
यस धार्मिक मान्यता वा परम्पराको उदय आजभन्दा एक लाख वर्ष अगाडि देखिनै संसारमा प्रचलित रहेको भन्ने प्रमाणहरू पाइएका छन् । यस सम्बन्धमा Furst 1972 : vii-ix लाई उदृत गर्दै Larry Peters लेख्छन्, ”Shamanism is thought to be mankind’s earliest religion, possibly dating back 100,000 years or more; it may well have been the religion of Neanderthal manÚÚ (Tamang Shamans an Ethnopsychiatric Study of Ecatasy and Healing in Nepal, 1998 : 7) । यसप्रकार बोन धार्मिक मान्यता तामाङ समुदायको लागि ज्यादै पुरानो दर्शन हो भन्नेमा शङ्का गरिरहनु पर्दैन । म्हेनङमा यिनै बोनहरूले के गर्छन् । कस्ता संस्कार, परम्परा वा संस्कृति प्रचलनमा रहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा निम्नानुसार पाउँदछौं ।
‘खेप्पास्हुङ’ शब्द ‘खेप्पा’ र ‘स्हुङ’ मिलेर बनेको हो । यसलाई अखेस्हुङ, अखेसुम पनि भन्ने गर्दछन् । कतिपयले नेपाली भाषामा उल्था गर्ने क्रममा भने ‘बुढो देउता’ भन्ने गर्दछन् । यो एक किसिमको पूजा हो । यस पूजाका निमित्त तोर्मा बनाउने प्रचलन रहेको पाइन्छ । भाले बलि दिइने यस पूजाको शुरूवात पहिलो मानव वा आदिमानवका छोराहरूको पालादेखि नै चलेको भन्ने सेरपहरूमा पाइन्छन् । यो पूजा दार्जिलिङमा पुग्दासमेत रहेको पाइन्छ । अहिले पनि केही वर्षअघि त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नु भएकी डा. अनिता बोम्जन लगायतले ‘खेप्पास्हुङ’ बारे आफ्ना आप्पाहरूले सुनाउने गरेको बताउँछन् । नेपालकै तरार्इमा पनि ‘हाम्रो बाजेले खेप्पास्हुङ खेप्पास्हुङ कहै छी । तर हामीलाई केही थाहा छैन । बाजेले जस्तै तोर्माहरू बनाएर तिम्रो पूजा गर्दैछौं । फलाक्न पनि आउँदैन । हाम्रो हजूरबाले जे फलाक्नु हुन्थ्यो; त्यही नै सम्झेर यो बलि लेऊ भन्दै बलि चढाएको भन्ने समेत गरिन्छन् ।
सिन्धुलीतिरका तामाङमा पनि यो पूजा अझै पनि प्रचलित रहेको छ । बैशाखमा ह्युल्जे पूजा गरेपछि खेतीपातीमा विशेष खट्नुपर्ने हुन्छ । जेठदेखि नै रोपाई शुरू हुने गाउँमा ‘बल गर केटा हो । म्हेनङमा खेप्पास्हुङ गर्दा तोर्मो र कुखुराको भालेको मासु (सुप) दिम्ला भन्छन् । यहाँ रहेको मान्यता अनुसार वर्षामासभरि मानिसले पानी र हिलोमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसक्रममा लागेको सारा चिसो (ओस) भने खेप्पास्हुङको भालेको मासु र सुप खुवाएपछि वा खाएपछि ठिक हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ । खेप्पास्हुङको भनेको गुरुचनदेओको पूजा हो । यस सम्बन्धमा मिथकीय मान्यता रहेका पाइन्छन्; जसको बारेमा ४.१.१० मा चर्चा गरिने छ ।
यस सम्बन्धमा लेखक तथा अनुसन्धाता रवीन्द्र तामाङले आफ्नो पुस्तक ‘तामाङ चाड-पर्व र पूजाहरू’मा उल्लेख गरेका छन् ।
४.१.२ ज्योहो पूजा
म्हेनङमा तामाङ समुदायले आफ्ना पूर्वज जो ज्योहो/ज्योमोका रूपमा रहेका हुन्छन्; तिनीहरूलाई पूजा आराधना गर्ने गर्दछन् । दशैँको मौसम वर्षरिकै सबैभन्दा उत्तम भएको साथै अन्नबाली पनि भित्र्याएर भरिपूर्ण हुने भएको त्यस्तैगरी फूलहरू पनि फुलेर साह्रै सुन्दर पर्यावरण हुने गर्दछ । त्यसैले सम्पूर्ण फलफूल तथा अन्नबाली उत्पादन सफल भएको उपलक्ष्यमा तामाङ समुदायले आफ्ना पूर्खालाई ज्योहो र ज्योमोको रूपमा धन्यवाद स्वरूप पूजा गर्ने प्रचलन रहेको विश्लेषक बुद्धि तामाङले बताउने गर्नु भएको छ । ज्योहो पूजाको बेला तोर्मासहित बलि दिने गर्दछन् ।
४.१.३ लक्मी पूजा
लक्मी पूजा पनि म्हेनङमा तामाङले गर्ने विशेष पूजा हो । यस पूजामा पोथी बलि दिने प्रचलन रहेको छ । यिनी देवी भएकीले पोथी बलि दिने प्रचलन चलेको हो । यसको अर्थ हिन्दू देवी भने होइन भन्छन्; बुद्धि तामाङ । यस बलिपूजा अन्य बलिपूजा भन्दा नितान्त फरक प्रकृतिको रहेको हुन्छ । यस पूजाको क्रममा बलि चढाएको पोथीलार्इ विधिवत रूपमा चोटामाथि राख्ने र छेपाच्यूको दिनमा मात्र निकालेर प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने प्रचलन रहेको देख्न सकिन्छ ।
छ्योरे पूजा पनि म्हेनङको महत्त्वपूर्ण पूजा हो । यस पूजाको क्रममा आफ्ना कुलका दाजूभाइहरू मूलघरमा जम्मा हुन्छन् । धुमधामका साथ पूजा गरेर म्हेनङ मनाउँछन् । यसै पूजालाई हिन्दू शासकहरूले तोडमोड गर्दै जबरजस्त रूपमा दोलखा भिमसेनको नाममा बलि दिन र बलि चढाइएको भालेको भुत्ला ढोकामा टाँस्न अनि रगतको छाप लगाउन लगाएको भन्ने गरेका छन् । यस पूजाका सम्बन्धमा बुद्धि तामाङ भन्छन्, छ्योरे र लक्मी दिदी बहिनी हुन् । म्हेनङमा यी दुर्इ देवीहरूलाई पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
४.१.५ ताफोले म्हेन्दोको प्रयोग
तामाङ समाज अनि विशेषतः म्हेनङमा ‘ताफोले म्हेन्दो’को अपरिहार्यता रहेको पनि देखिन्छ । यसैलाई ‘सयपत्री’ फूल पनि भन्ने गरिएको हो । म्हेनङको मौसममा फुल्ने सबैभन्दा राम्रो फूल नै ताफोले हो । यस फूलको पहिलो प्रयोग खेप्पास्हुङमा गर्ने प्रचलन रहेको छ । यदि कसैले खेप्पास्हुङ गरेन भने ताफोले म्हेन्दोको प्रयोग गर्दैन । त्यसभरि नै त्यस फूलको प्रयोग गर्न उसले पाउँदैन । त्यसैले खेप्पास्हुङलाई ताफोले म्हेन्दो प्रयोग गर्न अख्तियार लिने अवसरको रूपमा पनि लिने गरेका पाइन्छन् ।
४.१.६ टीका लगाउने
तामाङ समाजमा म्हेनङ मान्ने तर कुनै टीका लगाउने प्रचलन नरहेको विश्लेषक बुद्धि तामाङ बताउँछन् । तापनि कतिपय स्थानमा अहिले पनि सेतो टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ । केही वर्ष अघिसम्म पनि प्रायः तामाङले पनि रातै टीका लगाउने गर्दथे । टीका र जमरा संस्कृति सम्बन्धमा मगर समुदायमा आफ्नै व्याख्या रहेको देख्न सकिन्छ । जसको बारेमा तल ५ नं. बुँदामा चर्चा गरिने छ । टीका लगाउने प्रचलन रहेको भन्ने सम्बन्धमा रवीन्द्र तामाङले आफ्नो ग्रन्थ ‘तामाङ चाड-पर्व र पूजाहरू’मा उल्लेख गरेका छन् ।
४.१.७ म्य-दली क्लङ्बा/तीर खेल्ने वा तारो हान्ने
समाजमा म्य-दली क्लङ्बा वा रोप्पाको प्रचलन पनि रहेको थियो । विशेषतः छेपाच्यूको दिनमा गाउँलेहरू जम्मा भएर बाँसको धनुष र निगालोको तीर बनाएर तारो हान्ने संस्कृति रहेको थियो । पछिल्लो समयमा बन्दूक आएपछि भने म्य-दलीलाई छोडेर भरुवा बन्दूकको प्रयोग बढेको थियो । नेपालमा चलेको १० वर्षे जनयुद्धको क्रममा बन्दूकहरू खोसिएपछि भने त्यो संस्कृति पनि हराएको देखिन्छ । तथापि धादिङका कतिपय गाउँहरूमा अझै पनि क्रिपा क्लङ्बा जस्ता संस्कृति कायमै रहेको बताउँछन् । यस संस्कृतिले तामाङ समाजले उहिले शिकारी युगलाई पार गर्दै यहाँसम्म आएको भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।
४.१.८ खाद्य संस्कृति
कुनै पनि समुदायलाई मौलिक पहिचान सहितको बेग्लै हो भनेर चिनाउने एउटा पक्ष भनेको खाद्य संस्कृति पनि हो । म्हेनङ पर्वमा प्रयोग हुने खाद्य परिकार र संस्कृतिको आफ्नै महत्त्व रहेको देख्न सकिन्छ । यस संस्कृतिले समुदायको उद्विकास र ज्ञानको क्षेत्रबारेमा तथ्यहरू उजागर गरिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सकेसम्म नयाँ धानको चिउराको प्रयोग मुख्य मानिन्छ । म्हेनङलाई चिउराको चाडको रूपमा पनि चिन्ने गरेको छ । कोशेली लाने क्रममा पनि चिउरा अनिवार्य मानिन्छन् । चिउरा पनि मीलमा कुटाएको नभएर सकेसम्म ढिकीमै कुटाएको चाहिने मान्यता रहेको थियो । केही समयअघिसम्म पनि गाउँतिर कम्तिमा पनि देउतालाई चढाउन भने ढिकीमै कुटाएर चिउरा बनाउने प्रचलन रहेको थियो ।
त्यस्तैगरी भात (चामल) र तोर्मा अनि खेप्पास्हुङको क्रममा बलि चढाएको भालेको सुपको विशेष महत्त्व रहेको कुरा माथि नै उल्लेख गरियो । अष्टमीको दिन राँगा काट्ने र त्यो पनि पर्साएर मात्र काट्ने प्रचलन रहेको छ । राँगा काटेपछि भने त्यो दिन नुहाउन वर्जित मान्दछन् । सोही राती कुखुरा बास्नुअघि उठेर भोज खाने प्रचलन रहेको छ । भोजको क्रममा मासु र चिउरा ठूला र साना सबैलाई बराबरी रूपमा भाग लगाएर खाने गर्दछन् । सकेसम्म केराको पात र नभएमा शालको पाल गाँसेर टपरीमा खान्छन् । भोजमा केरा पनि आवश्यक मानिन्छन् । केरा खाएपछि भने त्यसको बोक्राहरू एउटा टपरीमा जम्मा गरी दोबाटोनेर लगेर फाल्छन् । त्यसरी फाल्नुको अर्थ हाम्रो परिवारले पनि भोज खायौं भनेर अन्यलाई सूचना दिनु हो । दही पनि भोजको क्रममा अनिवार्य मानिन्छन् । त्यसैले दही भएका घरहरूले आफ्ना नजिकका र दही नभएको घरमा पुर्याउने गर्दछन् । त्यसैले दही नै नभएको घरमा समेत दही जम्मा हुन्छन् र भोज राम्ररी चल्दछ ।
घिउ, तेल र मसलाको प्रशस्त प्रयोग गर्दै म्हेनङ मनाउँछन् । तोर्मोको होस् वा कुनै पनि खानेचिजको भाग लगाउँदा घरका ठूलासाना सबैलाई बराबरी भाग लगाउँछन् । ठूलो र सानो भनेर धेरै वा थोरै भाग लगाउन पाउँदैन । आफ्ना नजिकका नाताहरूलाई म्हेनङ भाग स्वरूप- चिउरा, केरा र स्यला ख्वङ (सिन्कामा उनेको मासुको मालाजस्तो) लाने प्रचलन रहेको छ । जाँड र अझ धेरै रक्सी प्रयोग गर्दछन् । पाहुनाको रूपमा आइपुग्नुपर्ने मान्छेको सबैजना नआइपुग्न पनि सक्छन् । यदि आएनन् भने तिनलाई म्हेनङको भाग स्वरूप चामल, चिउरा, मासु र रक्सी समेत पठाउने प्रचलन रहेको देख्न सकिन्छ । साथीसङ्गी र मितेरी साइनोका लागि समेत म्हेनङको भाग पुर्याउने तामाङ प्रचलन रहेको छ । म्हेनङको बेलामा कोशेली पुर्याउन नसकेमा वा जान नसकेमा त्यस सालको हिउँदभरिमा भएपनि जाने र जानुपर्छ भन्ने मान्यता समेत तामाङ समाजमा पाइन्छ ।
४.१.९ पिङ संस्कृति
तामाङ समाजमा पनि पिङ संस्कृति रहेको पाइन्छ । यद्यपि यो संस्कृति हिन्दू र अन्य आदिवासी जनजातिमा पनि प्रशस्त रहेको पाइन्छ । कतिपयले पिङलाई तामाङको संस्कृति भन्दा पनि आयतितको रूपमा मान्ने गरेका पनि पाइन्छन् । यति हुँदा-हुँदै पनि छेपाच्यूको दिन पिङ खेल्नु पर्ने र एकै छिन भएपनि पृथ्वीमाथि टेक्न छोड्नुपर्ने मान्यता रहेको देखिन्छ । यसले धर्तीमाता माथिको सम्मान भावलार्इ इङ्कित गरेको हुन्छ । मानिसले जन्मदेखि नै पृथ्वीमाथि टेकेर भार थपिरहेको हुन्छ । त्यसैले पृथ्वीमा टेकेको दस्तुर पनि तिर्नै पर्ने हुन्छ । त्यो भार कम गराउनको लागि पनि पिङमा झण्डिनुपर्ने जनविश्वास रहेको देखिन्छ ।
४.१.१० मिथक तथा आहानहरू
म्हेनङ सम्बन्धी थुप्रै मिथक वा आहानहरू पाइन्छन् । ती आहानहरूमध्ये खेप्पास्हुङ निकै प्रख्यात मानिन्छ । त्यस्तैगरी पिङ खेलेर एकै क्षण भएपनि धरामातालाई कुल्चन र भार कम गराउनुपर्ने, भोजको बेला खाएको केराको बोक्रा दोबाटोमा फाल्नुपर्ने, घामकिरीको मिथकहरू पाइन्छन् । म्हेनङ आउन लागेपछि गाउँतिर घामकिरीहरू प्रशस्त देखापर्दछन् । त्यसलाई तामाङ भाषामा ‘छिपिङपिङ’ भन्ने गर्दछन् । यसलाई ठाउँ विशेष केही फरक रूपमा चिन्ने वा नाम उच्चारण गर्ने गरेका पाइन्छन् । म्हेनङ बोलाउने र गाउँमा भित्र्याउने काम छिपिङपिङले गर्ने हुनाले साना नानीबाबुहरूले ”म्हेनङ हजी छिपिङपिङ ! मइ राँगुला डि छिङछिङ !!” भन्दै बालगीत गाउने गर्दछन् । ती नानीबाबुहरूले भने म्हेनङलाई बोलाएर ल्याउने किरीको रूपमा छिपिङपिङलाई चिन्ने र सोही अनुरूप गीत गाउँदै रङ्गीचङ्गी छिपिङपिङसँग खेल्ने गर्दछन् ।
ताफोले म्हेन्दोलाई पनि म्हेनङको गहनाको रूपमा चिन्ने गर्दछन् । त्यसैले खेप्पास्हुङभन्दा अगाडि ताफोले म्हेन्दोको प्रयोग गर्दैनन् । त्यसअघि प्रयोग गरेमा जुठो हुने र देउतालाई नचल्ने जनविश्वास पनि पाइन्छ । तामाङ गाउँघरमा अहिले पनि कोदोको ब्याड राख्ने क्रममा सँगै ताफोलेम्हेन्दोको पनि ब्याड राख्ने अनि कोदोसँगै बारीको डिलडिलमा रोप्ने गर्दछन् । त्यसैले म्हेननको बेलामा बारीको कान्लाकान्लामा ताफोलेम्हेन्दो ढकमक्क फुलेका हुन्छन् । जसले पर्यावरणी रूपमा पनि साह्रै मनमोहकता वा मादक थप्ने गर्दछ । म्य-दली लिएर तारो हान्ने प्रचलनको आफ्नै मिथकीय मान्यता रहेको देख्न सकिन्छ । सबैले तारो हन्ने तर लगाउन सक्नेलाई राम्रो निशानीवाजको रूपमा चिन्छन् । त्यस वर्षभरि गाउँले सबै मिलेर गर्ने शिकारको क्रममा उनी पहिलो शिकारी अर्थात् निशाना लगाउने व्यक्तिमा छानिन सक्छन् । म्हेनङको पूजामा भिमसेनपाती भनिने ‘फापरसिङमा’को पनि प्रयोग गर्दछन् । यसैको प्रयोग मर्चा बनाउने क्रममा पनि प्रयोग गर्ने गरेका पाइन्छन् ।
मिथकीय विश्वासकै कुरा गर्ने क्रममा खेप्पास्हुङलाई बिर्सन हुँदैन । कथा अनुसार आदिमानव म्हिए रेञ्जेनकी श्रीमती देवकन्या गङ्सल्मो थिइन् । पछि गोडा भाँचिएपछि देउताले छोरीलाई देवलोकमै फिर्ता लगेछन् । गर्भवती देवकन्या गङ्सल्मोले देवलोकमै छोरो जन्माइछन् । त्यो छोरो देवकन्या र मानिसको छोरो भएकोले चन अर्थात् शिकारी देउताको रूपमा स्थापित भएछन् । उनलाई शिकारी देउताहरूको प्रमुख मान्दछन् । पछि तिनी अंश खोज्दै आफ्ना बाउ कहाँ आइपुगेछन् । त्यसबखत उनका बाउले बाग्रैलमो -पहराकी देवीसँग विवाह गरेर घरबार बसाइसकेका रहेछन् । अंश मागेपछि सम्झौता भएछ; जसअनुसार पृथ्वीलोकमा रहेका दाजुभाइले दाजुको अंश स्वरूप प्रत्येक वर्षम्हेनङमा एउटा कुखुराको भाले बलि दिने बाचा कसम बाँधेछन् । त्यसरी शिकारी दाजुलाई दिइएको बलिको रगत मात्रै दाइले खाने हुनाले बाँकी मासु भाइहरूले नै पाएछन् (स्रोत : ङ्हेमा थाङ्पाल, पोखरीनारायणथान-काभ्रे) ।
त्यसलाई प्रसादको रूपमा लिएको हुनाले वर्षामासभरि शरीरमा गढेको ओस/चिसो पनि उक्त भालेको मासु र सुपले निकाल्छ भन्ने जनविश्वास बनेको रहेछ । सम्झौताकै क्रममा बारीको कान्लामा फुलेका ताफोले म्हेन्दोको पहिलो अधिकारी पनि गुरुचनदेओ नै भएछन् । त्यसैले उनैलाई चढाएपछि मात्रै मनुष्यले चलाउन पाउने भएछन् ।
४.२ बौद्ध धार्मिक परम्परा
तामाङ बौद्ध परम्परा र मान्यता अनुरूप म्हेनङमा निम्नानुसारका परम्परागत संस्कृति तथा मान्यताहरू प्रचलन रहेका पाइन्छन् । जसका बारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
कुनै त्यस्तो समुदाय छैन होला; जसलाई आफ्ना पूर्खाप्रति गर्व नहोस् । संस्कार संस्कृतिमा जस्तोसुकै फरक भएतापनि सबै समुदायका मानिसले आफ्ना पूर्खालाई पुज्ने वा भक्तभाव प्रदर्शन गर्ने गर्दछन् । नेपालमा तामाङ लगायत सबै जातजाति तथा समुदायका मानिसहरूले आफ्ना पूर्खालाई पुज्ने गरेका पाइन्छन् । म्हेनङमा तामाङ बोनहरूले विशेषतः खेप्पास्हुङको बेला आफ्ना पूर्वजको नामावली वाचन नै गर्दछन् । त्यस्तैगरी लामाहरूले पनि मृतक पूर्खाहरू कहीँ नतरेको वा समस्यमा परेको भए समस्याबाट मुक्ति होस् अनि अमिताभ लोकमै पुगेको भएपनि सदा राम्रो होस्; त्यस्तैगरी पूर्वजको सदा आशिरवाद प्राप्त भइरहोस् भन्ने यावत् मनसायका साथ तिनैका नाममा ङोवा गर्ने प्रचलन रहेको छ । भनिन्छ; ङोवाले घेवालाई पनि टार्न सक्छ । ”ङोवा विशेषतः फूलपातीको दिनमा गर्ने प्रचलन रहेको छ (स्रोत : पेमा मोक्तान, ठूलोपाखर-सिन्धुपाल्चोक साथै हिरामान बल, सर्स्युँखर्क- काभ्रे) ।”
४.२.२ डोल्मोको पूजा
तामाङ लामागुरुहरूका अनुसार म्हेनङको बेलामा डोल्मोको पूजा आराधना गर्ने प्रचलन रहेको छ । लामागुरु पाल्साङबज्र लामाका अनुसार म्हेनङको बेलामा हरित तारा (ग्रीन तारा)को विशेष पूजा आराधना गरिन्छन् । यिनी म्हेनङकै छेपागेको दिन जन्मेको बताइन्छन् । ताराहरू २१ प्रकारका हुन्छन् । ”महायानी बौद्धहरूले आफ्नो मनोकाङ्क्षा पूरा गर्न र विभिन्न डर र भयबाट मुक्ति पाउन हरित ताराको पूजा गर्ने गर्दछन् (मोक्तान, २०७१ : १६७) ।”
बोन प्रचलनमा रहेको ‘खेप्पास्हुङ’लाई नै तामाङ लामाले भने ‘खेपासुम/आखेसुम’ भनेका हुन् । यसले त्रिरत्नलाई इङ्कित गर्ने लामाहरू बताउँछन् । त्यस्तै गरेर लामा धर्ममा तीन सङ्गेहरूलाई मान्ने गर्दछन् । तिनमा ‘छ्योइकु, ल्हुङ्कु र टुल्कु पर्दछन् । तिनैको पूजा गरिने हुनाले ‘खेपासुम’ भनिएको हो । ‘सुम’ले तीन भन्ने अर्थ दिन्छ । बौद्ध धर्ममा ती तीनलाई उच्च तहको बुद्धको रूपमा स्वीकार गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
४.२.४ सङ्गे मेनलाको पूजा
बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पुज्ने बुद्धहरू मध्ये सङ्गे मेनला पनि हो । यसैलाई अङ्ग्रेजी भाषामा medicine Buddha भन्ने गरिएको हो । औषधी (जडिबुटी)सँग सम्बन्धित भएकोले नै यसलाई सङ्गे मेनला भनिएको स्पष्ट हुन्छ । तामाङ समाजमा ”मन्त्र भनेको कुरै हो ! औषधी भनेको झारै हो !! भन्ने उक्ति रहेको छ (स्रोतः लबोन तुलाबहादुर गोले, सिन्धुली) ।” म्हेनङको शुभअवसरमा तिनै सङ्गे मेनलाको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ (स्रोतः इन्द्रबहादुर गोले, सल्लेभुम्लु-काभ्रे) ।”
४.२.५ गुरु पद्म सम्भवको पूजा
तामाङ समाजले बौद्धधर्ममा गुरु पद्म सम्भवलाई विशेष मान्ने गरेको पाइन्छ । तिनैले भारतबाट तिब्बत जाने क्रममा काठमाडौं वरिपरिका तामाङलाई असिना पानी तर्काउनको लागि खेतमा फिरफिरे गाड्ने विधि सिकाएको कुरा लेखक तथा अनुसन्धाता रवीन्द्र तामाङले असिना र लामापाथी सम्बन्धी लेखमा उल्लेख गरेका देखिन्छन् । तिनै गुरु पद्म सम्भवको जन्म भने कमलको फूलमा भएको जनविश्वास पाइन्छ । म्हेनङको छेपाच्यूमा नै तिनको जन्म भएको भन्ने गरिन्छन् । त्यसैले कतिपय लामाहरूले नै त्यसदिनलाई गुरु पद्म सम्भवको जन्मदिनको रूपमा मान्ने गरेका छन् । ‘उहाँले नै तन्त्रयान, बोन्पोवाद र बुद्ध धर्म मिलाएर बेग्लै किसिमको लामा बुद्ध धर्मको विकास गर्नु भयो । विशेषगरी ञीन्मा सम्प्रदाय उहाँले विकास गरेकै रूपमा चलिरहेको छ (मोक्तान, २०७२ : ७३) ।”
४.२.६ म्हरमेन संस्कृति
महायानी बौद्ध परम्परामा ‘म्हरमेन संस्कृति’को आफ्नै महत्त्व रहेको देख्न सकिन्छ । ‘म्हरमेन’ शब्द ‘म्हर’ अर्थात् घिउ मा ‘मेन’ जोडिएर बनेको हो; जसले दीप प्रज्ज्वलन गर्ने भन्ने अर्थ दिन्छ । हरेक अवसरमा म्हरमेन बाल्नुलाई बौद्ध संस्कैतिकै रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसले आफ्नै अर्थ बोकेको हुन्छ । म्हेनङको अवसरमा प्रशस्त म्हरमेन बाल्नुले पनि तामाङ बौद्ध धर्ममा म्हेनङको महत्त्वलाई दर्साएको मान्न सकिन्छ ।
छ्योरे पूजा तामाङ बोनमा मात्र नभएर लामामा पनि प्रचलित रहेका कुरा लामागुरु पाल्साङबज्र लामा बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार ‘छ्योरे’ शब्द ‘छ्यो’ अर्थात् दिशा र ‘रे’ अर्थात् दिन मिलेर बनेको हो । विशेषतः छेपाकु (नवमी)को दिन चारवटा दिशाहरू (पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण); ती चारै दिशाहरूका बीचमा पर्ने अनदिशा भनिने अन्य चारवटा साथै पाताल र आकाश गरी दश दिशामा रहेका बुद्धहरूका पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ । यसले संसार (पृथ्वी) सृष्टिलाई सङ्केत गर्दछ भने प्रकृतिको पूजा पनि हो ।
४.२.८ सम्राट अशोक र अशोक वृक्ष
सम्राट अशोकलाई तत्कालीन समयमा चक्रवर्ती राजाको रूपमा चिनिएको थियो । उनले जीवनमा धेरै युद्धहरू गरे साथै जिते पनि ! अन्तमा कलिङ्गको युद्धबाट फर्कने क्रममा बौद्ध भिक्षुलाई भेटे । भेटको क्रममा बौद्ध भिक्षुको व्याख्या सुनेपछि उनले एकाएक राज्यसत्ता नै त्यागेर बौद्धधर्ममा प्रवेश गरे । आफ्ना सन्तानहरूलाई बौद्धधर्मको प्रचारमा खटाए । त्यसरी ती राजाले हतियार बिसाएको तिथि पनि म्हेनङको छेपाच्यूकै दिन परेको बताइन्छन् । त्यसरी हतियारसहित उठेका हात उनले तल झारेकैले अशोक वृक्षको हाँगो पनि माथितिर नगई तलतिर झरेका हुन् भन्ने मिथकीय मान्यता पनि पाइन्छन् ।
४.२.९ ञुङ्ने बस्ने
केही वर्ष अगाडिदेखि म्हेनङमा बौद्ध धार्मिक मान्यतानुरूप ञुङ्ने बस्ने वा राख्ने गरिएको छ । यस क्रममा एक दिन निराहार बसेर प्रेतलोक, एक दिन नबोलेर पशुलोक साथै दुःख सहेर नरकलोक भोग्ने प्रचलन रहेको छ । यसबाट तिर्यकबाट मुक्ति पाउने जनविश्वास रहेको पाइन्छ । दशैँको बेला अनेक थरी पशुपङ्क्षीहरूका हत्या गरेर बलि दिने प्रचलन रहेको छ । त्यसरी बलिमा चढेका प्राणीका चित्तले शान्ति प्राप्त गरुन् साथै मुक्ति मिलोस् भन्ने हेतुले यो व्रत बसेको बताउने गरेका पाइन्छन् ।
५. हिन्दू अतिक्रमण साथै सांस्कृतिक विचलन
हिन्दू अतिक्रमण र सांस्कृतिक विचलन सम्बन्धमा तामाङ मात्रै नभएर अन्य आदिवासी जनजाति वा मूलबासीहरू समेत समस्या परेका देखिन्छन् । ”राणाकालको प्रारम्भसँगै जंगबहादुर कुँवरले वि.सं. १९१० मा जारी गराएको मुलुकी ऐनले वैधानिक रूपमा चलाएको हिन्दुकरण अभियानबाट भ्रमित हुन पुगेको यथार्थतालाई बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने प्रयासै नगरी आफ्नै पुर्खाको धरोहर मौलिक संस्कार र चाडबाडको गलत ढंगबाट व्याख्या, विश्लेषण गर्ने प्रवृत्तिले थप जटिलता सिर्जना भएको छ [श्रीसमगर, मीन ‘मगर जातिका संस्कार र चाडबाड’ (२०७१) पृ. ११९]।” उदृत अंशले सङ्केत गरेको समस्या तामाङ समाजमा पनि देखिएको छ ।
उक्त लेखमा यो पनि भनिएको छ- ”झाँक्रीवादी धार्मिक मान्यता, प्रकृतिपूजा र त्यसकै केन्द्रीयतामा रहेर विकास भएका चाडबाड, संस्कार, रीतिरिवाजव, लोकगीत, नृत्यु भेषभूषा आदिका समग्रता नै मगराती सभ्यता हो (ऐ.ऐ.) ।” यहाँ तामाङ समुदायले पनि आफ्नो मौलिक पहिचानमूलक सभ्यताको खोजी गर्ने हो भने आदिवासी/मुलबासी भएको नाताले बोन (बोम्बो/झाँक्री)वादी सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही गर्न नसकेकैले अहिले तामाङ संस्कृतिहरू खिचडी हुने क्रममा रहेको देख्न सकिन्छ । तामाङ समुदायमा पनि उच्च खानदानी वा पढेलेखेको भनी देखाउनको लागि पनि आफ्नौ मौलिक पहिचानसहितको संस्कृतिलाई वास्ता नगर्ने अनि हिन्दूवादी सोच राख्नेहरूको कमि छैन ।
पछिल्लो समयमा आएर बौद्धधर्मको नाममा मौलिक संस्कृतिहरूमाथि प्रहार भएको भन्ने गुनासाहरू पनि नसुनिएका होइनन् । कतिपय गुम्बा तथा विदेशमा गएर बौद्धदर्शन अध्ययन गरेर आएकाहरूले तामाङ संस्कृति सम्बन्धी अध्ययन गरेके हुँदैनन् । तिनै व्यक्ति बौद्धगुरु बनेर तामाङ बस्तीमा प्रवेश गर्दछन् । त्यहाँ रहेका ऐतिहासिक मौलिक पहिचानयुक्त साथै पूर्खाको नासोको रूपमा स्थापित तामाङ मूल्य र मान्यतालाई बुझ्न सक्तैनन् । त्यसपछि प्रचलित तामाङ संस्कृतिलाई गलत र गर्नै नहुने कार्य भन्दै सखाप पार्दै अगाडि बढ्दछन् । यस्तो हुनु सरासर दूर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने गुनासाहरू पनि प्रशस्त आउन थालेका छन् ।
यसै प्रसङ्गमा मीन श्रीसमगर आफ्नो लेखमा अगाडि लेख्छन्, ‘… २०४६ सालपछि भने मौलिकताका नाममा बौद्ध धर्मका विभिन्न सम्प्रदायका कर्मकाण्डी संस्कार, हिन्दू कर्मकाण्डी संस्कार र आफ्नौ मौलिक परम्पराका केही अंश मिसाएर ‘बुख्याँचा’ संस्कृति निर्माण अनपेक्षित तथा अप्रत्यासित रूपमा भइरहेको देखिन्छ (ऐ.ऐ. पृ. ११७) ।” अहिले तामाङ समुदाय पनि यही यथार्थको शिकार हुने क्रम दैनदिन बढिरहेको छ । तथापि तामाङ समुदायमा बौद्ध धर्म दर्शन अर्थात् लामा संस्कृति पनि धेरै अगाडिदेखि नै प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले पूर्ण रूपमा लामा संस्कृतिलाई यस समाजबाट हटाउन सकिने अवस्था छैन ।
लामामा पनि गाउँमा रहेका टीका लामा भनिएकाहरू र पछिल्लो समयमा बाहिरफेरो पुगेर पढेर आएका अब्बल दर्जाका भनिएका लामाबीचको संयोजनको समस्या रहेको छ । उहिलेदेखि प्रचलित तामाङ लामाले कर्मकाण्ड चलाउँदासम्म समाजमा कुनै समस्या थिएन । बरू राम्रोसँग चलिरहेकै थियो । पछिल्लो समयमा घुसेका नयाँ लामाहरूले नै अघिल्ला पुस्ताका; जो तामाङ समुदायको आफ्नै भैसकेका छन्; तिनैलाई हटाएर आफूहरू स्थापित हुन खोज्दाखेरि यस्तो समस्या देखिएको भन्ने सुनिन्छन् ।
माथि उल्लेख गरिएका तथ्यहरूले हामी तामाङ समुदाय भनेको सर्वप्राचीन बोन धर्मको अनुयायी भन्ने स्पष्ट गर्दछ । यसको अर्थ नेपालको पनि प्रस्तावित ताम्सालिङ क्षेत्रको मात्रै नभएर नेपाल उपत्यकाको समेत पहिलो बासिन्दा हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यिनीहरू बोनधर्मका अनुयायी र अभ्यासकर्ता नै हुन् । पछिल्लो समयमा यिनीहरूले बौद्धधर्मलाई पनि अङ्गिकार गरेका थिए । तथापि त्यसबेलाको बौद्धधर्मले दार्शनिक रूपमा आफ्नो र सांस्कृतिक रूपमा बोनलाई आत्मसात् गरेका थिए । त्यसैले ती दुर्इका बीचमा द्वन्द्वको सट्टा सामिप्यता कायम रहेको थियो ।
शुरूमा हिन्दूधर्मको प्रवेशले तामाङ समुदायमा खासै असर गरेको थिएन् । मल्ल कालमा आएपछि हालको पशुपति तामाङहरूबाट लुटियो । त्यस क्षेत्रका विहारहरू भत्काएर हिन्दूकरण थालेको भन्ने अझैपनि धेरैले दाबी गर्दै आएका छन् । तैपनि पृथ्वीनारायण शाहको प्रवेश हुँदासम्म पनि तामाङ समुदायले विभिन्न स्थानमा तामाङ राज्यहरू कायम गरेर एकलौटी कबिलायी शासन चलाएर बसेकै थिए । अनेकन छलकपट गर्दै शाहहरूले तामाङ राजा र राज्यहरू सखाप पारे । तामाङ भूमिहरू खोस्न थाले । राणाकालमा आइपुगेपछि चरम दमन गरे । आफैँले पालेको आफ्नै गोरु पनि काटेर खान वा कुलपूजा गर्न दिएनन् । मानिस मर्दा लाने गरिएको ‘मेस्या’माथि बन्देज लगाए । पछि त्यही ‘मेस्या’ अर्थात् गोरुको मासु बाख्राको मासुद्वारा टार्न थाले । त्यसपछि भने ‘मेस्या’ पनि ‘म्हेस्सा’ वा ‘म्हेप्सा’ वा ‘मेप्सा’ अर्थात् बाख्राको मासुमा परिणत गरिए ।
थोरै अगाडि हेर्ने हो भने तेमालमाथि अशोजको २ गते आक्रमण गरेर समाप्त पारेको देखिन्छ । त्यसको अर्थ आफ्नो म्हेनङ मान्ने तयारीमा रहेको बेला झुक्याएको स्पष्ट हुन्छ । गोर्खाको लिगलिग कोटका घलेहरूमा त सोही म्हेनङको अवसरमा राजा नै छान्ने प्रचलन रहेको थियो । सोही बेला छलपूर्वक घलेको राज्य शाहहरूले कब्जा गरेका थिए । त्यसअघि मगरहरूमा झाँक्रीवादी संस्कृति रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । त्यस्तैगरी गुरुङदेखि राइ र लिम्बुहरूसमेत झाँक्रीवादी सांस्कृतिक प्रचलनका अनुयायी भएको शङ्का छैन । मीन श्रीसमगर दाबी गर्छन्, ”… डस्याक्के (थालनी/प्रारम्भ) शब्द प्रयोग हुनेक्रममा डस्याक्केबाटै दसैँ शब्दको व्युत्पत्ति भएको मानिन्छ (ऐ.ऐ. पृ. १३८) ।” मगरातमा ”दसैँमा गरिने पितृ तथा कुलानपूजा … परम्परा झाँक्रीवादी तथा प्रकृतिपूजक धार्मिक विश्वास र मान्यताका स्पष्ट संकेत पाइन्छन् (ऐ.ऐ. पृ १३५) ।”
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मगरातीहरू दशैँमा आफ्ना पितृ तथा कुलानपूजा गर्दथे । उनीहरू प्रकृतिको पूजा गर्दथे । उनी अझै अगाडि लेख्छन्, ”उँधेली गामपूजा परम्पराबाट शरदकालीन दसैँ मनाउने प्रचलन विकास भएको मानिन्छ । मकै भित्र्याउने र जौ छर्ने समयमा असोजे दसैँ मनाइन्छ । साउनदेखि असोजसम्म मकै भित्र्याउने र असोजदेखि जौ छर्ने काम हुन्छ । मुख्य अन्नबाली मकै र जौलाई भूमि तथा प्रकृति देवताका पवित्र एवम् अमूल्य प्रसाद सम्झेर छर्ने र भित्र्याउने समयमा पूजाआजा र नाचगान गरी तिनै अन्नका जमरा शिरमा लगाउने परम्पराबाट ऐतिहासिक मगरात क्षेत्रमा दसैँ चाड अभ्यास भएको देखिन्छ । दसैँको समयमा खनजोत गर्न तथा अन्नबाली काट्न प्रयोग गरिने कृषि औजार तथा हातहतियार, आफ्ना कुलपितृ तथा स्थानीय देवदेवीको पूजा गरिन्छ । त्यहाँका जीव, वनस्पति, जल, थल, हावा आदि प्राकृतिक वातावरणलाई स्थानीय देवदेवीका रूपमा पुज्ने गरिन्छ । असोजे दसैँलाई धुमधामसँग मनाइने हुँदा बडा (ठूलो) दसैँ भन्ने गरिएको हो (ऐऐ. पृ. १४४) ।”
यहाँ बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने मगरहरूले दशैँ भनेर मानेका थिए तर त्यसको अर्थ हिन्दूले भनेजस्तो राक्षसहरूमाथि देवताहरूले विजय प्राप्त गरेको अर्थमा होइन । यहीनेर तामाङले ‘म्हेनङ’ मान्नुको अर्थ पनि मगरको जस्तै नै हो । तथापि राणाकालीन शासकहरूले जबरजस्ती मगरको दशैँ र तामाङको म्हेनङमाथि उनीहरूको दशैँ ल्याएर खप्ट्याए । जसले गर्दा मगर र तामाङको मौलिक संस्कृति चाहिँ ओझेल पर्न थाल्यो । कतिपय मौलिक संस्कृतिहरू दशैँद्वारा सखाप नै पारियो । त्यसैको परिणाम स्वरूप आज हामीलाई ‘म्हेनङ’ भन्दा आफ्नो पूर्खाले स्थापित गरेको पितृ/ज्योहो पूजा र अन्नबाली भित्र्याएको खुशीयालीको पर्व भन्ने अर्थ आउँदैन । बरू हिन्दूद्वारा लादिएको दशैँको घीनलाग्दो अनुहार मात्रै आउने गरेको छ । त्यसैले अब दशैँलाई चिन्ने र त्यसलाई फालेर आफ्ना पूर्खाले स्थापित गराएका संस्बृतिको खोजी र पालना नै आजको तामाङ समुदायले सबैभन्दा अगाडि गर्ने पर्ने काम भएको छ ।
तामाङ राज्यहरू शाह वंशले कब्जा गरेर करीब २४० वर्षमात्रै भएको छ । त्यसमा पनि दशैँ लादिएको राणाकालमा आएर मात्रै भन्ने देखिएको छ । कुनै पनि जातिलाई सखाप पार्नको लागि त्यसको संस्कृतिमाथि प्रहार आवश्यक हुने तर्क गरिन्छन् । सोही अनुरूप नेपालमा वि.सं. १९७४ बैशाख (इ. १९१७) मा लिइएको भाषा सम्बन्धमा हर्क गुरुङले, कृष्णचन्द्र अर्याल एवं वैद्यनाथ जोशी (सेढार्इ) गोर्खा भाषा, गोर्खा एजेन्सी कार्यालय, नेपाल, वैशाख १९७४ (इ. १९१७) लाई उदृत लेखेका छन्- ”अझ सम्म एक ही ”गोर्खा भाषा” को सर्व-व्यापकता हुन सकेको छैन, किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बु, सुनुवार, दनुवार, थारु प्रवृतिका जंगली भाषालाई अर्ध-चन्द्र (गलहती) लगाउन्न, त्यहाँसम्म ”गोर्खा भाषाको उन्नती हुन्छ” भन्नु र ”मुख्य भाषा कहिन योग्य छ” भन्नु केवल मनोलड्डु मात्र हो (जनजाति सेरोफेरो, इ.सं. २००४ पृ. २९) ।”
त्यसपछिको उदाहरण दिँदै हर्क गुरुङ लेख्छन्, ”Education in Nepal, Report of the Nepal National Education Planning Commission. Kathmandu : College of Education, 1956, p. 97 ।” लाई उदृत गर्दै लेख्छन्, ”माथिको सोचाई राणाकालीन भएकोले स्वाभाविक ठान्नु पर्दछ । तर प्रजातन्त्र स्थापना पछि र्इ. १९५६ मा अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको निम्न भनाई पनि त्यहि एकलौटी पाराको छ : And it should be emphasized that if Nepali is to become the true national language, then we must insist that its use be enforced in the primary school … Local dialects and tongues, other than standard Nepali, should be vanished [banished] from the school and playground as early as possible in the life of the child (ऐ.ऐ. पृ. ९२) ।
यी उदाहरणहरूले पनि तामाङ माथि हिन्दूको दशैँ कहिलेदेखि लादियो होला भन्ने सम्बन्धमा अनुमान लगाउन सहज बनाएको छ । सन् १९२७ मा बौद्धधर्म प्रचार गरेको अभियोगमा बौद्ध भिक्षुहरूलाई देशनिकाला गरेका थिए । यसबाट पनि हिन्दूधर्मलार्इ नेपालका आदिवासी जनजातिले कसरी हेरेका थिए । हिन्दूको सट्टा तिनीहरूले बौद्ध र बोन धर्मलाई कसरी अभ्यास गरिरहेका थिए भन्ने स्पष्ट गराउँदछ । यस्तै दमन र अतिक्रमणका कारण हिन्दूधर्मको हाबी र मौलिक पहिचानयुक्त धर्म संस्कृतिको समाप्ति क्रम चलेको देख्न सकिन्छ ।
स्मरणीय तथ्य यो पनि हो कि- तामाङ समुदाय आजभन्दा करीब ३२ हजार वर्ष अगाडि नै काठमाडौं वरिपरि आइपुगिसकेका थिए । यस सम्बन्धमा जनकलाल शर्माले आफ्नो पुस्तक ”हाम्रो समाज : एक अध्ययन” (२०५८) पृ. ३१५-११७ मा उल्लेख गरेका छन् । हिन्दूहरू भने आजभन्दा आठ हजार वर्ष अर्थात् इशापूर्व ६००० वर्ष अगाडिसम्म पनि रुसको माथ्लो वोल्गातटमै रहेका थिए । त्यसपछि बसार्इँ सर्दै आउने क्रममा इ.पू. २००० मा मात्रै हिन्द- आर्य कहलिएका थिए । तिनीहरूले बेबिलोन कब्जा गर्नु अघि नै त्यहाँ सभ्यताको विकास अरूले नै गरिसकेका देखिन्छ । सिन्धु सभ्यताको पनि स्थापना अगाडि नै त्यहाँ सभ्यता कायम भैसकेको थियो भन्ने तथ्यलाई महापण्डित राहुल साङ्कृत्यायनले आफ्नो कृति ”वोल्गादेखि गङ्गा”मा उल्लेख गरेको देख्न सकिन्छ । जुन कृतिलाई नारायणप्रसाद आचार्यले अनुवाद गरेका छन् ।
६. समयले जन्माएको आवश्यकता र महत्त्व
भनिन्छ; समय बलवान हुन्छ । त्यसैले समयसँगै हरेकले आफूलाई बढो जतन साथ समाहित गराउन सक्नुपर्दछ । त्यसक्रममा असफल हुनु भनेको जीवनमै असफल हुनु हो । यही कारण हुनुपर्दछ- जीवन भनेको सम्झौता हो भनेर भन्ने गरेको पनि ! कतिपयले भने शक्तिशालीहरू समयसँगै होइन; बरू समयचाहिँ तिनीहरूसँगै समाहित हुन्छ; भन्छन् ! यस्तै तार्किक कुराले कहिले कहीँ राम्रो कुरालाई जन्म दिएको हुन्छ । अझ भनौं समयले यस्तो मोडमा पुर्याइदिन्छ- जहाँ केही न केही गर्न कर्ता बाध्य हुने गर्दछ । त्यस्तैगरी आम नेपाली आदिवासी जनजातिका साथै तामाङलाई पनि समयले एउटा यस्तो बिन्दूमा उभ्याएको छ । त्यही बिन्दूनेर समयले आवश्यकता कोरलेको छ । त्यसको आफ्नै महत्त्व पनि स्थापित गराइदिएको पनि छ ।
विश्वदेखि नेपाली परिवेशले कम्तिमा पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो मौलिक संस्कृतिका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन् साथै पुनरुत्थानको लागि जगाएको छ । पुनःव्याख्या, संरक्षण तथा छलफलको लागि डिस्कोर्शको रूपमा स्थापित गर्न गराउन पनि दबाब दिइरहेको देख्न सकिन्छ । बद्लिँदो परिवेश साथै राजनैतिक खिचातानीले ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा राज्यसत्ताले कोतरेको घाउ र तिनका खाटाहरूलाई बल्झाइरहेको छ । उपचारको खोजी गर्न अनि पूर्खाहरूमाथि भए गरिएका घोर अपमान र अन्यायको क्षतिपूर्ति माग्न उक्साइरहेको छ । आफ्ना पूर्खाबाट छलकपटपूर्ण तरिकाले खोसिएका नासोहरू खोज्न र प्राप्त गर्न अह्राइरहेको छ ।
यसै कारण हुनुपर्दछ- नेपालमा तामाङ समुदायले आफ्नो पहिचान र सामर्थ्य प्रदर्शनीको लागि अवसर खोजिरहेको छ । आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, भूमि, इतिहास र निरन्तरताको पाटोहरूको उत्खनन् गरिरहेका छन् । यो एक प्रकारको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन पनि हो । त्यसैले अब तामाङ समुदायले म्हेनङलाई हिन्दूको दशैँको रूपमा हेर्नु भन्दा पनि आफ्नै पूर्खाले स्थापित गरेका मौलिक पहिचानमूलक धरोहरको रूपमा बुझ्न आवश्यक भएको छ । अन्यथा समुदायको पहिचान समाप्त हुनेछ । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन पनि बेअर्थ सावित हुने साथै ओझेल पर्ने मात्रै नभर्इ समाप्त नै हुन बेर लाग्ने छैन ।
चुनौतीविहीन शायद केही हुँदैन । म्हेनङको पनि आफ्नै चुनौतीहरू छन् । यसअघि हिन्दू राज्यसत्ताद्वारा म्हेनङलाई सिध्याउने ध्येयका साथ उनीहरूको दशैँ लादेका थिए । जसले गर्दा, म्हेनङ एक किसिमले लङ्गटो जस्तो भैसकेको छ । त्यसमा पनि बोन र लामाधर्मका बीचमा देखिएका मतभेदहरूले पनि थप जटिलता थपेको देख्न सकिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहदेखि राणाकाल हुँदै पञ्चायती सत्ताले गरेको विभेदले समग्र समुदाय नै थिलथिलो भएको छ । वि.सं. २०४६ सालपछि आएको परिवर्तनले पनि न तामाङ, न हिन्दू अनि न बोन न लामा बनाएको छ । ती सबैको समिश्रणले पूरै संस्कृतिलाई खिचडी बनाएको छ ।
यसअघि परिवर्तनको नाममा केही प्रयासहरू त भएका थिए । ती प्रयासहरू पनि क्षणिक आवेग साथै समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय गम्भीर अध्ययन बिनाका थिए । परिणामतः दशैँ बहिष्कारको नाममा बौद्धधर्मको अन्धाधुन्दा नक्कल एवंरीतले बोन धर्म संस्कृतिमाथि हेयको भाव सिर्जना हुन पुग्यो । अस्पष्ट साथै मनगढन्ते लेख, रचना साथै ग्रन्थहरूको प्रकाशनले समुदायलाई कुहिरोको काग बनायो । साउनमा आँखा फूटेको गोरुले जहिले पनि हरियो देख्छ भन्ने उखानका गोरु भएका छौं । आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई चिन्न नसक्ने र आफ्नैलाई पनि अर्को भनेर तर्सिने रोग लागेको छ । पुनःजागरणको कुरा त गरेकै हो तर व्यवहारमा उतार्ने कर्मतिर कहिल्यै लागिएन । यही नै म्हेनङ सम्बन्धमा तामाङ समुदायको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
अब तामाङले आफ्नो र अर्काको चिन्न सक्नुपर्दछ । हामी को हौँ भनेर चिन्नका निमित्त को होइनौं भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी भएको छ । आफ्नो मौलिक संस्कृति, भाषा, धर्म र पहिचानको बारेमा समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय अध्ययन थाल्न सक्नुपर्दछ । आदिवासी अध्ययनका निमित्त विश्वविद्यालय नै खडा गर्न सक्नुपर्दछ । म्हेनङ लगायत संस्कार संस्कृतिमाथि थोपरिएका अन्य संस्कृति साथै आफ्नो धर्म र संस्कृतिको मुख्य आधार के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन सक्नु आजको आवश्यकता हो । अन्तरजातीय विवाह तथा स्वाँगेभाइ मिच्ने क्रमलाई रोक्न सक्नुपर्दछ । भाषा, भेषभूषा तथा खाद्य संस्कृतिका बारेमा व्यापक छलफल थाल्न ढिलो गर्न हुन्न । कम्तिमा पनि म्हेनङभरि तामाङ भाषा, पहिरनको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउन सकेमा मात्रै पनि भोलिको उज्यालो भविष्य छिटै साक्षत्कार हुनेछ ।
एक्ला-एक्लै होइन; सामूहिक र सामाजिक हुन सक्नुपर्दछ । आफू खुशी निर्णय गर्ने बानी त्याग्न सक्नुपर्दछ । म्हेनङ हाम्रो होइन वा हिन्दूको भनेर बहस गर्नुको सट्टा यथार्थ तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै यसैपालिदेखि मान्न सक्नुपर्दछ । म्हेनङ हिन्दूको हो वा बोनको कुरीतिको उपज भन्नुको सट्टा मौलिक पहिचानको निमित्त आफ्ना पूखाले निर्माण गरिदिएका उपहारको रूपमा आत्मसात् गर्न सक्नुपर्दछ । यस पर्वलाई हिन्दू वा बौद्ध आँखाबाट मात्र हेर्ने र गलत व्याख्या गर्ने बानी त्याग्नु सक्नुपर्दछ । म्हेनङ हिन्दूको होइन । यो त तामाङको मौलिक पर्व हो । दशैँ त धेरै पछि मात्र आएको हो । म्हेनङ त धेरै अघि नै तामाङ पूर्खाले निर्माण गरेका थिए । त्यसैले म्हेनङलाई घृणा हैन माया गरौं । यसैले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई सफलताको शिखरसम्म पुर्याउनेछ ।